फोक्सिङकोटका पहिरो पिडितले प्रति घर ४० हजार रुपैयाँ राहत पाए – Palpa Samachar
By Samacharpalpa	 Last updated Feb 4, 2021
रम्भा गाउँपालिका वडा नं. २ फोक्सिङ्गकोटका पहिरो पिडीतलाइ राहत रकम वितरण गरिएको छ । गत भाद्र महिनामा पहिरोमा परि घरवार विहिन परिवारलाइ प्रतिपरिवार ४० हजार रुपिया प्रदान गरिएको हो । रम्भा गाउँपालिका वडा नं. ५ ताहुँको मलेङ्ग माइत घर भई हाल बेल्जियममा बस्दै आएकी सिर्जना कार्की थापाबाट घरवार विहिन परिवारलाई ४०।४० हजार रुपियाका दरले एकलाख २० हजार रुपिया प्रदान गरिएको हो ।
पीडितहरुलाई सिर्जना कार्कीकी ममतामयी आमा लक्ष्मीदेवी कार्की तथा भाइ अर्जुन कार्कीले रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, वडा अध्यक्ष उमानसिं सारु तथा वडा सदस्यहरु भोवीसरा सारु, चेतबहादुर सुनारीको रोहवरमा रकम हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा रम्भा २ फोक्सिङ्गकोट झोकेदीकी पेटरोगी कमला सिंजालीलाइ समेत नगद १० हजार रुपिया सहयोग प्रदान गरिएको थियो ।
पहिरोमा परि फोक्सिङ्गकोट बेलौजाका मनबहादुर गाहाको छोरीको मृत्यु भएको थियो भने हाल उनको परिवार ससुराली घरमा शरण लिई रहेका छन । यसै गरि पहिरोले पूर्णरुपले घर ध्वस्त भएका दलबहादुर गाहाको परिवार छिमेकीको घरमा शरण लिइ बस्न बाध्य भएका छन । यसै गरि फोक्सिङ्गकोट सुरुमडाडाका बिरबहादुर गाहाको घर पनि पहिरोले पुरीए पछि बुबाको घरमा बास बसीरहेका छन । बिरबहादुर गाहाको श्रीमतिको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको थियो । पिडीतहरुलाइ चामल, नून, तेल का साथै साबुनहरु समेत प्रदान गरिएको थियो ।
राहत वितरण कार्यक्रममा रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले धन र मन भएका मानिसहरु अहिलेको समयमा बिरलै भेटिने गरिएको र यो सहयोगलले परिवालाई राहत पुग्ने तथा गाउँपालिकाका पिडीतलाई सहयोग गरेकोमा सहयोगीहरुलाई धन्यवाद दिए । वडा सदस्य चेतबहादुर सुनारीले विेशमा रहेर पनि यहाँका जनताको पीर मर्का बुझेर सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिए ।
राहत रकम प्रदान गर्ने सिर्जना कार्की थापा लामो समय देखि बेल्जियमको राजधानी बु्रसेल्समा नोकरी गर्छिन् । उनको श्रीमान मदन थापा, छोराछोरीहरु सुकृति, प्रिती तथा प्रसन्न थापा बु्रसेल्समा सपरिवार संगै बस्दै आएका छन् । ताहुँको मलेङ्ग माइतघर भएकी सिर्जनाकी दाजुभाईहरु निर्माण व्यवसायी हुन । कार्की ब्रदर्श कन्सट्रक्सन चलाउने भाईहरु अर्जुन कार्की (कृष्ण) र प्रकाश कार्कीले कोरोना महामारीको बेलामा गाउँगाउँमा खाद्यान्न वितरण गरेका थिए । जेठो दाजु जनक कार्की संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयमा सेवारत छन् ।